Ny ACE Architectural
Ace China dia iray amin'ireo mpamatsy ambony ny tohatra fiakarana an-tsehatra sy ny faravodilanitra, varavarankely sy varavarana, fanaka namboarina, vokatra fandroana.
Ny tanjon'ny orinasanay dia ny fanomezana fitaovana azo antoka sy mahasoa ho an'ny fiainana an-trano manerantany; Fananganana marika iray mijanona iray fanondrana fitaovana maritrano ambony.
Miaraka amin'ny fototra matanjaka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny orinasan'ny ACE Archi dia manolotra fahaizana mifameno sy vokatra manokana, manaraka ny fironana momba ny tontolo iainana amin'ny fikarakarana sy ny fomba fiainana.
ACE Archi dia manome anao serivisy fananganana trano sy varotra avo lenta izay mifanaraka amin'ny ilainao sy ny teti-bolanao. Manomboka amin'ny tohatra mankamin'ny fanaka fanaka sy ny fanaka namboarina dia mampanantena izahay fa ho afa-po tanteraka amin'ny serivisinay sy ny vokatrao.
Ny tanjonay voalohany dia ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, ary miezaka izahay hahatratra ny fahalavorariana tanteraka amin'ny zavatra rehetra ataontsika.
10 taona mahery izahay no niasa.
Efa niasa tamin'ny tetikasa 135 izahay tany amin'ny firenena 56; Fantatray tsara ny fenitry ny fananganana eo an-toerana.
Ny ekipa mpamorona herinaratra sy injeniera dia afaka manome consulting Design manokana amin'ny mpanjifa tsirairay.
Ny kalitaon'ny vokatra dia arahan'ny mpiasanay matihanina izay manana traikefa an-taonany maro eo amin'ny sehatry ny asa.
Fanombanana ireo akora henjana, fitaovana mandroso & teknisiana mahay miteraka dingana mahafinaritra.
Izay atolotray ho anao